डा.एन्थोनी फाउची भन्छन्- कोरोना रोक्न यी ५ कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार ०८:०७ मा प्रकाशित
२०७७ श्रावण १५ बिहीबार, एजेन्सी । अमेरिकी भाइरल रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले विश्वबाटै कोरोनाबाट रोक्न ५ वटा महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।बुधबार एमएसएनबिसीसँग कुरा गर्दै डा. फाउचीले विश्व यी ५ सिद्धान्तलाई मानेर अगाडी बढेमा मात्र कोरोना रोक्न सकिने बताएका छन् ।
त्यस्तै डा. फाउचीले भनेको चौथो उपाय हात सफा गरिरहने रहेको छ भने पाँचौ उपाय बार रेस्टुरेन्टमा नजाने र सम्भव भएसम्मका बारहरु बन्द गर्ने रहेका छन् ।
डा. फाउचीले बिबिसीसँगको कुराकानीमा राष्ट्रपतिसहित विशिष्ट व्यक्तिहरुले अप्रमाणित कुराहरु सामाजिक संजालमा सेयर गरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हालै ट्रम्पका छोराले कोरोना बारेको यस्तै अप्रमाणित सूचना भएको भिडियो सेयर गर्दा ट्वीटरले उनको एकाउन्ट नै १२ घण्टाका लागि सस्पेन्ड गरेको थियो ।